Waa maxay u jeedka safarka Farmaajo ee Uganda? | KEYDMEDIA ONLINE
25 June 2021 Farmaajo oo lagu eedeeyay inuu hor istaagay hormarinta dekedda Berbera
24 June 2021 Dowladda oo caburin ku billawday waalidiinta caruurtooda la askareeyay
24 June 2021 Maxaa laga filan karaa dakedda Berbera ee xariga laga jaray?
24 June 2021 Danjiraha Finland Erik Lundberg oo la badalay
24 June 2021 Maxay la aamuseen Midowga Musharixiinta?
24 June 2021 Ajaaniib katirsan Al-Shabaab oo Muqdisho lagu maxkamadeynayo
24 June 2021 Wariye lagu dhaawacay Muqdisho
24 June 2021 RW hore ee Guinea Bissau oo qeyb ka ah wafdi gaarey Somaliland
24 June 2021 Xiriirka Qoor-Qoor iyo Farmaajo oo xumaaday [Akhri Sababta]
24 June 2021 Swan oo ka hadlay geedi-socodka doorashadda Soomaaliya
24 June 2021 Dagaalka Sh/Dhexe oo waji cusub yeeshay
24 June 2021 Jabhadda oo soo rogaal celisay iyo dagaal ka socda Tigray
23 June 2021 Turkiga oo qorsheynaya inuu saldhig dayax gacmeed ka hirgaliyo Soomaaliya
23 June 2021 Waa maxay u jeedka Safarka Safiirka Sweden ee gaaray Hiiraan?
23 June 2021 Magaalada Muqdisho oo maamulkeedii dayacay
23 June 2021 Qodobadii lagu heshiiyay 17-ka May oo wax laga baddalayo
23 June 2021 Xuska Xorriyadda yaan la suurad xumeyn
23 June 2021 Dagaal ka dhacay duuleedka Muqdisho
22 June 2021 Golaha Wadatashiga Qaran oo Muqdisho ku kulmaya isbuuca soo socda
22 June 2021 Aqalka Sare oo daadka raacsiiyay lix wareegto oo Farmaajo saxiixay
Waa maxay u jeedka safarka Farmaajo ee Uganda?
Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa dhawaan u ambabixi doona waddanka Uganda.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynaha waqtigiisii sharciga ahaa dhamaaday ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa maalmaha soo socda u safri doona Magaalada Kampala ee Caasimadda dalka Uganda.
Sida ay ogaatay Keydmedia Online,u jeedka safarka Farmaajo, ayaa ah, ka qeyb galka caleema-saarka Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, oo dhawaan mar kale ku guuleystay doorashadii xilka Madaxweynahaa waddankaas.
Farmaajo, ayaa ka degi doona Kampala, talaadada soo socota oo ku beegan 12-ka May, waa ka hor inta aysan dhamaan bisha barakeysan ee Ramadaan, wuxuuna halkaas kula kulmi doonaa Madaxweynayaal kale oo ka socda wadamada Africa, kuwaas oo iyaguna kusoo wajahan Caasimadda Uganda.
Farmaajo, ayaa la rajeynayaa inuu Caaleema-saarkaan, kaga faa’iideysto, ololiyihiisa doorashada soo socota, waxaana hadda la sii qorsheeyay Madaxweynayaal ay Madaxtooyada Soomaaliya dooneyso in ay la kulanto, sida ay xaqiijinayaan ilo loo qaateen ah.
Yoweri Kaguta Museveni, ayaa dhawaan markii lixaad oo xariir ah ku guuleysaty doorashada xilka Madaxweynaha, wuxuuna majaraha Uganda hayaa tan iyo 1986.
Farmaajo oo lagu eedeeyay inuu hor istaagay hormarinta dekedda Berbera
Warar 25 June 2021 0:16
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa dadka dib u xasuusiyay in Kooxda Farmaajo hoggaamiyo ay hore u diideen hormarinta dekedda Berbera.
Dowladda oo caburin ku billawday waalidiinta caruurtooda la askareeyay
Warar 24 June 2021 23:36
Maxaa laga filan karaa dakedda Berbera ee xariga laga jaray?
Warar 24 June 2021 17:50
Danjiraha Finland Erik Lundberg oo la badalay
Warar 24 June 2021 16:37
Fursadaha isbedelka dalka iyo doorka dhalinyarada
Warar 19 June 2021 7:12
Boqolkiiba 75% bulshadda Soomaaliya waa dhainyaro dad'doodu ka yartahay 25 jir, taasoo muujinaysa inuu dalka leeyahay mustaqbal wanaagsan.
Kheyre iyo Rooble waa in ay ka jawaabaan su’aalahaan
Afar sano kadib beentii Farmaajo oo bannanka timid
Farmaajo oo lagu eedeeyay in uu doorashada ku qarinayo dambiyo uu galay
Maxaa xubnaha NISA looga saari waayay gudiyadda doorashadda?